Shuruudaha Guud ee iibka - Toolsdecuisine.com
Qaadista iyo Baaritaanada
Cunto isku dheelitir
"Biyaha oo dhan"
Shuruudaha Guud ee iibka
SHARCIYADA GUUD IYO SHURUUDAHA IYO ISTICMAALKA
Websaydaan waxaa ka shaqeeya Outilsdecuisine.com. Goobtan, shuruudaha "annaga", "our" iyo "our" waxay tixraacayaan Kitchenware.com. CookingStyle.com waxay bixisaa barta internetka, oo ay ku jiraan dhammaan macluumaadka, qalabyada iyo adeegyada aad heli kartid, Isticmaalayaasha, oo kuxiran aqbalaadda shuruudaha, shuruudaha, siyaasadaha iyo ogeysiisyada halkan ku qoran. halkan.
By booqday this site iyo / ama by iibsiga mid ka mid ah waxyaabaha our, aad galaan our "Service" iyo ku heshiiyaan in ay ku xidhnaan by shuruudaha soo socda iyo xaaladaha ( "Shuruudaha iyo Xaaladaha", "Xaaladaha Guud ee Sale iyo Isticmaalka" , "Terms"), oo ay ku jiraan marka la eego, xaaladda iyo siyaasadaha dheeraad ah kaas oo la tixraacayo waxaa halkan iyo / ama la heli karo ka sameeyey by HyperLink. Shuruudaha kuwaas oo Conditions of Sale iyo Isticmaalka waxay khuseeyaan dhammaan dadka isticmaala of this site, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn isticmaala kuwa caleenta goobta, kuwaas oo iibiya, macaamiisha, baayacmushtariyaasha, iyo / ama ka-qaybgalayaasha.
Fadlan akhri shuruudaha iibka iyo Isticmaal si taxadar leh kahor intaanay helin ama isticmaalin boggeena. By helitaanka ama isticmaalka qayb ka mid ah boggan, waxaad ogolaatay in lagu xiro shuruudaha iyo shuruudaha iibka iyo isticmaalka. Haddii aadan ku raacsanayn shuruudaha iyo shuruudaha heshiiskan, markaa waa inaadan geli karin barta internetka ama adeegso adeegyada halkaas lagu bixiyo. Haddii shuruudaha iyo shuruudaha iibka iyo isticmaalka loo tixgeliyo dalab, aqbalaadu waxay si kooban u xaddidan tahay shuruudaha iyo shuruudaha iibka iyo isticmaalka.
Dhammaan sifooyinka cusub iyo qalabka cusub ee lagu dari doono dukaankan ayaa sidoo kale lagu qaadi doonaa shuruudaha iyo shuruudaha iibka iyo isticmaalka. Waxaad la tashan kartaa qaybta ugu dambaysa ee Shuruudaha Guud ee Isticmaalka iyo Isticmaalida wakhti kasta boggan. Waxaanu xaq u leenahay inaan cusbooneysiinno, isbedelno ama aan ku bedelno qeyb ka mid ah Shuruudaha iibka iyo Isticmaalka boostada iyo / ama isbedel ku yimaada boggayaga. Waa masuuliyadaada inaad si joogto ah u eegto boggan si aad u aragto haddii isbeddello la sameeyay. Isticmaalkaada inteeda badan ee website-ka ama helitaankaaga ka dib markaad soo dirto wixii isbeddel ah ayaa ka dhigan aqbalaaddaada isbedeladaas.
Dukaankayaga waxaa lagu marti qaaday Shopify Inc. Waxay na siiyaan meherad e-ganacsi oo noo ogolaanaya inaan ku iibino alaabta iyo adeegyadeena.
QODOBKA 1 - SHARCIYADA MAGAALADA IYO ONLINE SHAQAAL
Adiga oo aqbalaya shuruudaha iibka iyo Isticmaalka, waxaad u taagan tahay inaad gaadhay da'da aqlabiyadda wadankaada, gobolkaaga ama gobolka, iyo inaad adigu nagu siisay ogolaanshahaaga inaad u ogolaato qof kasta oo da 'weyn yar yar ee kharashka ku baxa si aad u isticmaasho website-kan.
isticmaalka waxa ka sameysan, waayo, wax kasta oo ujeeddo sharci daro ah ama aan la ogalayn our waxaa ka mamnuuc ah, oo waa inaadan, ee macnaha guud ee isticmaalka adeegga, ku xadgudbin xeerarka aad awooda (oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn sharciyada xuquuqdaada).
Waa inaadan gudbinin dirxiga, fayraska ama xeer kasta oo kale ee dabiiciga ah.
Wax kasta oo jebin ama jabin shuruudaha iyo shuruudaha iibka iyo isticmaalka waxay keeni doonaan in si deg-deg ah loo joojiyo Adeegyadaada.
QODOBKA XNUMKA - SHURUUDAHA GUUD
Waxaanu xaq u leenahay inaan u diidno helitaanka adeegyada qofkasta waqti kasta sabab kasta ha ahaato.
Waxaad fahamsan tahay in macluumaadkaaga (marka laga reebo macluumaadka kaarka deynta) lagu wareejin karo nidaam aan la aqoonsanayn, taasina waxay tusineysaa (a) wareejinta shabakadaha kala duwan; iyo (b) isbeddelada ku waafaqsan oo ay la qabsadaan shuruudaha farsamo ee isku xirnaanta shabakadaha ama qalabka. Macluumaadka kaararka deynta ayaa had iyo jeer lagu kaydiyaa inta lagu jiro isku gudbinta shabakadaha.
Waxaad ogolaatay in aan la soo saari, nuqul, nuqul, iibiso, ka iibin ama loogana qayb ka mid ah Service ama isticmaal Service ama helitaanka Service ama la xiriir website-ka kaas oo Adeegga waxaa lagu bixiyaa iyada oo aan oggolaansho qoraal cadaan ah ka hor naga.
Magacyada lagu isticmaalay heshiiskan waxaa lagu darayaa fududaantaada, mana xadayn doonin ama saameyn doonin Shuruudahaan.
QODOBKA 3 - MACLUUMAADKA, MACLUUMAADKA IYO DHAGAYSIGA
Mas'uuliyad kama saarno haddii macluumaadka laga heli karo boggani aysan sax ahayn, dhamaystirneyn ama la soo koobi karo. Mawduucan boggan waxaa loogu talagalay ujeedooyinka macluumaadka oo keliya oo aanad aheyn ilahaaga macluumaadka oo keliya ee go'aan qaadashada, iyada oo aan marka hore la tashanin ilaha saxda ah oo dhammeystiran oo dhammeystiran. Haddii aad go'aansato inaad ku tiirsanaato waxyaabaha ku jira boggan, waxaad samaynaysaa khatartaada.
Boggani wuxuu ku jiri karaa qaar ka mid ah macluumaadka hore. Macluumaadkii hore, dabeecaddiisa, ma aha mid casri ah, waxaana loo bixiyaa ujeedooyin macluumaad oo keliya. Waxaanu xaq u leenahay inaan bedelno macluumaadka boggan wakhti kasta, laakiin kama masuul ah inaan cusbooneysiinno macluumaadka boggayaga. Waxaad isku raacsan tahay in ay tahay masuuliyadaada inaad la socoto isbeddel ku yimaada boggayaga.
QODOBKA XNUMKA - KALA DUWAN QIIMEYNTA IYO Qiimaha
Sicirada alaabtayadu waxay ku xiran yihiin ogeysiis la'aan.
Waxaanu u haysanaa xuquuqda wakhti kasta si aan wax uga beddelo ama u joojino Adeegga (iyo qayb kasta ama qaybta Adeegga) iyada oon ogeysiis iyo wakhti kasta.
Kuma tiirsaneyno adiga ama cid kale saddexaad ee isbedelka qiimaha, hakinta ama joojinta Adeegga.
ARTICLE 5 - KHATARAHA AMA ADEEGYADA (haddii ay khuseyso)
Qaar ka mid ah alaabada ama adeegyada qaarkood ayaa laga heli karaa bog internetkeena. Alaabada ama adeegyadan waxaa laga yaabaa in lagu heli karo tiro xadidan waxaana laga yaabaa in lagu soo celiyo ama la bedelo iyadoo la raacayo Siyaasadeena Soo Celinta.
Waxaan sameynay intii karaankeena ah si aan u muujino sida ugu macquulsan ee midabada iyo sawirada alaabtayada oo ka muuqda dukaankayaga. Ma balan qaadi karno in muuqaalka midabada ee shaashadda kombiyuutarkaagu uu noqon doono mid sax ah.
Waxaan xaq u leenahay, laakiin waajib kuma aha in la sameeyo, si loo yareeyo iibinta badeecadeenna ama adeegyadeena qof kasta, iyo juqraafi ama juqraafi kasta. Waxaan xaq u yeelan karnaa xuquuqdan arrin kiis-kiis. Waxaanu xaq u leenahay inaan xadidno tirada alaabooyinka ama adeegga aan bixino. Dhamaan sharaxaadda badeecada iyo qiimaha badeecadda waxay ku xiran tahay wakhti kasta oo aan ogaysiis lahayn, anaga oo kali ah. Waxaannu xaq u leenahay inaan joojinno badeecada waqti kasta. Bixin kasta oo adeeg ama sheyga lagu soo bandhigay meeshan waa mid aan sharci ahayn oo sharcigu mamnuuco.
Ma dalbaneyno in tayada alaabta, adeegyada, macluumaadka, ama badeecadaha kale ee aad heshay ama iibsatay ay dabooli doonaan filashooyinkaaga, iyo in khalad kasta oo adeegga lagu saxayo.
QODOBKA 6 - MACLUUMAAD KU SAABSAN MACLUUMAAD IYO MACLUUMAAD
Waxaannu xaq u leenahay inaan diidno amar kasta oo aad nala soo xidhiidho. Waxa laga yaabaa, in aanu ku tiirsanaan karno, hoos u dhigno ama tirtiro tirada alaabta la iibsaday ee qof walba, guriga ama amarka. xayiraad waxaa ka mid ah waxaa laga yaabaa in amar ag dhigay ama account isku mid ah macaamiisha, kaarka isla credit, iyo / ama amarada isticmaala biilasha isku mid ah iyo / ama maraakiibta. Haddii aanu u bedelno lahaa amar ama haddii aan burin waa, laga yaabee in aan isku dayo in aad soo sheegto inaad la xiriirto ee e-mail iyo / ama cinwaanka biilka / phone number la siiyo waqtiga amarka ayaa la dhigay. Waxaannu xaq u leenahay inaan xadidno ama mamnuucno amarro in, xukunka keligiis ah, laga yaabo in uu ka yimaado ganacsatada, iibiyeyaasha ama qaybiyaasha.
Waxaad ogolaatay inaad bixiso si joogto ah, dhamaystiran oo sax ah amarka iyo macluumaadka xisaabta ee dhammaan amarrada lagu dhejiyo dukaankeenna. Waxaad ogolaatay in aad isla markiiba cusbooneysiiso koontadaada iyo macluumaadka kale, oo ay ku jiraan cinwaanka emailkaaga, lambarrada kaararka deynta iyo taariikhda dhicitaanka, si aan u dhamaystirno macaamilkaaga oo aan kula soo xiriirno hadba sida lagama maarmaanka ah.
Wixii faahfaahin dheeraad ah, fadlan arag siyaasadayada soo celinta.
QODOBKA 7 - QALABKA HALISTA
Waxaa laga yaabaa inaan ku siinno helitaanka aaladaha saddexaad ee aan ku soconaynno, xakamaynno ama saameyn ku yeelan karno.
Waxaad qiraysaa oo aad ogolaatay in aan bixino qalabka noocan ah "sida" iyo "sidii la heli karo" iyada oo aan la helin wax damaanad ah, matalaad ama shuruudo nooc kasta ah iyo iyada oo aan la ansixin. Ma lahaan doonno masuuliyad sharci ah oo keeneysa ama la xidhiidha isticmaalka qalabkan saddexaad ee ikhtiyaarka ah.
Haddii aad isticmaasho qalab ikhtiyaari ah oo aad ku bixiso goobta, waxaad ku sameyneysaa khatartaada iyo goonideedaada, waana inaad la tashataa shuruudaha qalabkani ay bixiyaan shirkadda saddexaad ee khuseeya.
Waxaan sidoo kale, mustaqbalka, siin karnaa adeegyo cusub iyo / ama waxyaabo cusub oo ku yaal boggayaga (oo ay ku jiraan qalab iyo ilo cusub). Tilmaamahan cusub iyo adeegyadani waxay sidoo kale ku xiran yihiin shuruudaha iyo shuruudaha iibka iyo isticmaalka.
QODOBKA 8 - LIISKA QAYBTA LABAAD
Waxyaabaha qaarkood, alaabooyinka iyo adeegyada ay heli karaan adeeggayaga waxaa ku jiri kara waxyaabo ka yimaada dhinacyada saddexaad.
Xidhiidhka ka yimaada qaybaha sadexaad ee ku yaala boggan waxaa laga yaabaa in laguu wareejiyo website-yada sadexaad ee aan nala xiriirin. Looma baahna inaan dib u eegno ama qiimeyno macnaha ama saxnaanta goobahaas, mana bayaanno ama aan qaadno mas'uuliyad kasta oo ah maadooyinka, bogga, badeecada, adeegga ama shey kale oo la heli karo ama laga soo galo boggaan saddexaad.
Masuul kama lihin wax khasaare ah ama waxyeelo la xidhiidha gadashada ama isticmaalka badeecad, adeegyo, ilo, waxyaabo, ama hawlo kale oo la sameeyey oo la xidhiidha boggaga internetka ee sadexaad. Fadlan si taxadar leh u akhri siyaasadaha iyo habdhaqannada kooxaha saddexaad oo hubi inaad fahamto iyaga ka hor intaadan gelin wax dhaqdhaqaaq ah. Cabashooyinka, sheegashooyinka, welwelka, ama su'aalaha la xidhiidha alaabooyinka dhinacyadan saddexaad waa in loo gudbiyaa dhinacyadan saddexaad.
ARTICLE 9 - FURSADAHA, SU'AALAHA IYO KALE EE LOOGU TALAGALAY
Haddii, at our codsi, waxaad soo gudbin content gaar ah (tusaale ahaan, inay ka qayb qaataan tartamada), ama iyada oo aan codsi naga kuu soo diri abuur leh fikrado, talooyin, soo jeedinta, qorshayaasha ama waxyaabo kale, waxaa internetka ama e-mail, boostada, ama haddii kale (oo si wadajir, "comments"), waxaad na siin xaq, waqti kasta iyo iyada oo aan la xadidayn, edit, nuqul, u daabacaan, la qaybiyo , tarjumaan oo si kale u adeegso iyo warbaahinta wixii faallo ah ee aad noo soo dirto. Ma nala joogno oo aan loo baahnayn (1) si loo ilaaliyo qarsoodiga faallooyinka; (2) inuu bixiyo magdhow qof kasta wixii faallo ah ee la bixiyey; (3) si looga jawaabo faallooyinka.
Waxa laga yaabaa, laakiin waajib kuma aha in sidaas la sameeyo, si ay ula socdaan, edit ama ka saar content in aan ogaado in aannu lasameeyay kaliya, in ay sharci-darro ah, weerar, hanjabaad, qadaf ahayn, ceeb u soo jiidaya, qaawan, fisqi ama haddii kale objectionable, ama in uu xad gudbo wax kasta oo khabiir ah ama shuruudaha iyo shuruudaha iibka iyo isticmaalka.
Waxaad ogolaatay inaad ku qorto faallooyin aan ku xadgudbin xuquuqda kooxaha saddexaad, oo ay ku jiraan copyrights, trademarkada, asturnaanta, shakhsiga, ama xuquuqda shakhsiga ama xuquuqda kale. Waxaad kaloo ku raacsan tahay in faallooyinkaagu aysan ka koobnayn wax sharci darro ah, waxyeelo, weerar ama waxyaabo qishi ah, mana ay ku jiraan fayrasyo ​​kombuyuutar ama waxyaabo kale oo khayaano ah oo wax walba u saameeya howsha adeegga. ama bog kasta oo la xidhiidha. Ma isticmaali kartid cinwaanka e-mail been ah, iska dhig inaad tahay qof aanad ahayn, ama isku day inaad naga lumiso iyo / ama dhinacyada saddexaad sida ilaha faallooyinkaaga. Waxaad si buuxda masuul uga tahay dhamaan faallooyinka aad u dirto iyo weliba saxsanaanta. Waxan qaadeynaa masuuliyad iyo inaan ka dhigno wax kasta oo ku-ool ah wixii faallooyin ah ee aad u dirto ama in dhinac kasta oo saddexaad ay daabacaan.
QODOBKA 10 - WARBIXIN QOF AH
Soo gudbinta macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed ee dukaankeenna waxaa maamula Siyaasadeena Qarsoodiga ah. Riix halkan si aad u aragto Siyaasadeena Qarsoodiga ah
QODOBKA 11 - XADGUDUBYADA, DHULKA IYO DHACDOOYINKA
Waxaa jiri kara macluumaad marmar ah oo ku saabsan boggayaga ama Adeega oo ku jiri kara khaladaad qaldan, qalab aan ka jirin ama maqnaanshaha laga yaabo inay la xiriirto sharaxaada alaabada, qiimaha, dhiirrigelinta, bixinta, ujrada maraakiibta, wakhtiyada dhalmada iyo helitaanka. Waxaanu xaq u leenahay in aan saxno wixii qalad ah, qalad la'aan, ka tagid, iyo in la bedelo ama cusbooneysiiyo macluumaadka ama la soo rogo amarro, haddii macluumaad kasta ee Adeegga ama bogga kale ee la xidhiidha aan sax ahayn, iyo , wakhti kasta iyo ogeysiis la'aan (oo ay ku jiraan ka dib markaad amartay amarkaaga).
Annagu kuma qasbanayn inaan cusbooneysiinno, cusbooneysiinno ama aan cadeyno macluumaadka Adeega ama shabakadaha kale ee la xidhiidha, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn macluumaadka qiimaha, marka laga reebo sida sharcigu u baahan yahay. Taariikh cusub lama cusbooneysiiyo ama cusboonaysiin Adeega ama shabakad kale oo la xidhiidha waa in la tixgeliyaa si loo ogaado in macluumaadka Adeegga ama shabakadaha kale ee la xiriira la bedelay ama la cusbooneysiiyay.
QODOBKA 12 - ISTICMAALKA HORUMARINTA
Marka lagu daro mamnuucidda ku qoran shuruudaha iyo shuruudaha iibka iyo isticmaalka, waxaa lagaa mamnuucayaa inaad isticmaasho goobta ama waxyaabaha soo socda: (a) ujeedooyin sharci darro ah; (b) in uu u hoggaansamo dhinacyada saddexaad si uu u guto ama uga qeyb galo falalka sharci darrada ah; (c) Inuu ku xad-gudbayo xeer-goboleed kasta ama xeer kasta oo caalami ah, dawlad-goboleed, dawlad goboleed ama dawlad-goboleed, xeer ama nidaam; (d) Jebinta ama ku xad-gudubka xuquuqdeena xuquuqda lahaanshaha ama kuwa saddexaad; (E), handadaad, xadgudub, la caayo, dhaawac, duraanna, aflagaado ah, kama dhigaan, cabsiiyo ama qofna takoori ku saleysan jinsiga, nooca galmada, diinta, qowmiyadda, jinsiyad, ka da ', asal qarameed, ama curyaanimo; (f) inuu soo gudbiyo macluumaad been ah ama marin habaabin; (g) inay gudbiyaan ama gudbiyaan fayruusyada ama nooc kasta oo kale oo ka mid ah xeerka xaasidnimada ah ee loo isticmaali doono ama loo isticmaali karo hab wax u dhimaya hawlgalka ama hawlgalka adeegga ama wixii kale ee la xiriira, bogga madax banaan ama internetka; (h) inuu ururiyo ama la socdo macluumaadka shakhsi ee dadka kale; (i) in ay isbaaraan, khiyaamaan, afduubaan domain, macluumaadka kala jejebiyaan, raadiyaan, sahamiyaan ama sawiraan shabakadda (ama khayraad kale); (j) loogu talagalay ujeedo aan qarsoodi ahayn; ama (k) si loo yareeyo ama u gudubno tallaabooyinka amniga ee adeeggayaga, boggaga kale, ama internetka. Waxaanu xaq u leenahay inaan joojino isticmaalka adeeggaaga ama bog kasta oo la xidhiidha kufsiga ee isticmaalka mamnuucidda.
QODOBKA 13 - KALA DUWAN GANAAXYADA IYO MASUULIYADDA LUMISAL
Ma dalbaneyno ama aan ku amarno in adeegsigaaga adeeggayagu uu noqon doono mid aan kala go 'lahayn, dhakhso ah, amaan ah ama qalad la'aan ah.
Ma sugayno natiijooyinka laga yaabo in lagu helo adeegsiga Adeegga wuxuu noqon doonaa mid sax ah ama lagu kalsoonaan karo.
Waxaad ku raacsan tahay in mararka qaar laga yaabo in aan ka saarno Adeegga wakhti aan xadad lahayn ama joojiso Adeegga wakhti kasta adiga oo aan laguu soo dirin.
Waxaad si cad u raacsan tahay in adeegsigaaga adeegga, ama aadan awood u lahayn inaad adeegsato adeegga, waa khatar keliya. Adeegga iyo dhammaan walxaha iyo adeegyada laguu siiyay Adeegga waa (haddii aan si cad loo sheegin annaga oo kale) aan ku siinay "sida" iyo "sidii loo heli lahaa" isticmaalkaaga, adigoon matalayn damaanad iyo shuruud la'aan nooc kasta ha ahaato, muujiyo ama qeexdo, oo ay ku jiraan dhamaan damaanad qaadyada ganacsiga ama ganacsiga, uqalmida ujeedo gaar ah, adkeysi, magac iyo ciqaab la'aan.
Outilsdecuisine.com, our agaasimayaasha, saraakiisha, shaqaalaha, kuwa taabacsan, wakiilada, qandaraaslayaasha, layliyo, qeybiyeyaasha, adeeg bixiyeyaasha iyo fasaxa siisay laga yaabaa in ay jiraan xaalado aan loo qabsan dhaawac, khasaare, dalab kasta, ama wax kasta oo toos ah, aan toos ahayn, qalabka, ciqaabta, khaas ahaan, ama natiijooyinka soo-gaadhista nooc kasta, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn khasaaraha faa'iidada, dakhliga, keydinta, xogta, kharashka beddelka ah ama waxyeelo lamid ah, waa qandaraasle, jirdil (xitaa haddii ay jirto dayacaad), masuuliyad adag ama haddii kale, taasoo ka dhalatay isticmaalka adeeg kasta ama sheyga adeeggan, ama wixii dalab kale oo la xidhiidha si kasta oo aad u isticmaasho Adeegga ama shey kasta, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidneyn wax qalad ah ama ka tagid Mawduuc kasta, ama wax khasaare ah ama waxyeelo nooc kasta ah adeegsiga Adeegga ama wax kasta oo ah (ama shay kasta) oo la daabacay, la sii gudbiyey, ama haddii kale laga helayo Adeegga, xitaa haddii laguu digay suurtagalnimada inay dhici karaan. Sababtoo ah dawlad-goboleedyada qaar ama degaannadu uma oggolaanayaan ka-saarista ama xaddidaadda waxyeelada ama natiijada ka iman karta, masuuliyadayadu waxay xadidnaan doontaa heerka ugu hooseeya ee sharcigu oggol yahay.
QODOBKA 14 - INDEMNITY
Waxaad ogolaatay in indemnify, difaaco iyo ilaalinta Outilsdecuisine.com, our shirkadda, deeq, xulufadeeda, wada-hawlgalayaasha, saraakiil, agaasimayaal, wakiilada, qandaraaslayaasha, fasaxa siisay, bixiyeyaasha adeegga, qandaraaslayaasha, qeybiyeyaasha, layliyo iyo shaqaale, marka la eego wixii dalab ama dalab ah, oo ay ku jirto khidmadaha qareenka macquulka ah, oo ay sameeyeen dhinac kasta oo saddexaad sababo ama ka soocmaada ku xadgudubka Shuruudaha iibka iyo Isticmaalka ama dukumintiyada ay u gudbiyaan, ama jebinta sharcigaaga ama xuquuqda qof saddexaad.
QODOBKA 15 - XIISAHA
Haddii ay dhacdo in shuruudaha iyo shuruudaha iibsiyada iyo isticmaalkaas loo arko sharci darro, aan waxba laga qaban karin ama aan la fulin, qodobkan waxaa laga yaabaa in loo adeegsado inta uu sharcigu ogol yahay, qaybta aan la dabaqi karinna waa loo tixgelinayaa in laga tago shuruudaha iyo shuruudaha iibka iyo Isticmaalka, khilaafaadkani ma saamaynayo ansaxnimada iyo sida loo fulin karo dhammaan qodobada kale ee haray.
QODOBKA 16 - TERMINATION
Waajibaadka iyo deymaha ay soo gudbiyeen dhinacyada ka hor taariikhda joojinta waxay sii ahaaneysaa hirgalinta kaddib marka la joojiyo heshiiskan oo dhan ujeedooyin kasta.
Shuruudaha iyo Shuruudaha iibka iyo Isticmaalku waa kuwo wax ku ool ah illaa iyo inta ay joojinayaan adiga ama aanad. Waxaad joojin kartaa shuruudaha iyo shuruudaha iibka iyo Isticmaal wakhti kasta adigoo noo sheegaya inaanad rabin inaad adeegsato adeegyadayada, ama markaad joojiso isticmaalida boggayaga.
Haddii aan ogaado, in our lasameeyay kaliya, aad ku guul dareysato, ama haddii aan ka shakisan tahay in aadan awoodin in ay u hoggaansamaan shuruudaha ka mid ah Xaaladaha of Sale iyo Isticmaalka, waxaan sidoo kale ku joojin karaa Heshiiskan waqti kasta oo aan idiinku Digi horeyna waad u ahaan doontaa waajibaad ah dhammaan lacagaha ku xiran ilaa iyo taariikhda joojinta, iyo / ama laga yaabo inaanu kuu diidi karno inaad gasho adeegyadayada (ama qayb kasta oo ka mid ah ).
QODOBKA 17 - SHARCI KU DHISAN
Wax kasta oo aan ku guul darreyno annaga oo ku dhaqma ama hirgelineyno xaq ama bixinta shuruudaha iyo shuruudaha iibka iyo Isticmaalku waa inaanay noqonin ka-dhaafitaanka xuquuqdaas ama hab-raacaas.
Shuruudaha iyo shuruudaha iibka ama Isticmaalka amase siyaasad kasta ama sharciyada kale ee aan daabacno boggan ama xidhiidhka adeegga wuxuu noqonayaa heshiiska oo idil iyo heshiis dhexmara adiga iyo annaga oo aan maamulno isticmaalkaaga Adeega, oo beddelaan dhammaan isgaadhsiinta hore, kuwa soo-jeedinta iyo heshiisyada, afka ama qoraal ahaan, adiga iyo annagaaga (oo ay ku jiraan, laakiin aan ku xaddidneyn, nooc kasta oo hore ee shuruudaha iyo shuruudaha iibka iyo isticmaalka).
Wax kasta oo aan la garanayn sida fasiraadda Shuruudaha Guud ee iibka iyo Isticmaalka waa in aan lagu fasirin tarjubaanka qoraalka.
QODOBKA 18 - SHARCIYADA ARDEYGA
Shuruudaha Guud iyo Isticmaalka, iyo heshiis kasta oo kale oo kala duwan iyada oo loo marayo taas oo aanu ku siin Adeegyada la maamuli doonaa waxaana lagu micneeyey sharciyada ee ciidamada ee 22 Rue Neuve, VERNOU BRENNE ON, F, 37210, France.
ARTICLE 19 - HORUMARINTA HESHIISKA GUUD AH IYO SHURUUDAHA IYO ISTICMAALKA
Waxaad la tashan kartaa qaybta ugu dambaysa ee Shuruudaha Guud ee Isticmaalka iyo Isticmaalida wakhti kasta boggan.
Waxaan xaq u leenahay, si ikhtiyaari ah, si aan u cusbooneysiinno, wax uga badalno ama loo bedelo qayb kasta oo ka mid ah Shuruudaha iibka iyo Isticmaalka boostada iyo isbeddelada boggayaga. Waa masuuliyadaada inaad booqato boggayaga si joogto ah si aan u aragno haddii wax isbeddel ah la sameeyey. Isticmaalkaada sii socota ama aad u gasho boggayaga ka dib daabacaadda wixii isbeddel ah ee shuruudaha iyo shuruudaha iibka iyo Isticmaalka ayaa ka dhigan aqbalaadda isbedeladan.
QODOBKA 20 - XIRIIR
Su'aalaha ku saabsan shuruudaha iyo shuruudaha iibka iyo isticmaalka waa in loo diraa cookware@gmail.com.
Saxeex si aad u hesho dalabyo dhiirrigelin ah
© 2019 Xuquuqda daabacaadda Kitchenware.com. All rights reserved